High Quality Nkecha Design 17T All Set Carbon Fiber Derailleur pole
* Adabara SHIMANO DA9100 DA9150 R8000 R8050 nnyefe
12 / 17T super nnukwu size ndu wheel set usoro
* Azọpụta 45% yinye esemokwu eguzogide tụnyere 11T ndu wiil
* Efere amị version azọpụta karịa 2.2 watts nke nkezi ike tụnyere ndị mbụ nnyefe usoro
* Full carbon eriri onu
* Full 7075 aluminum alloy CNC ọnwụ fechaa ndu wheel na TC4 titanium alloy spindle
* Efere amị version Ceramic Bead Bearing Version NSK Steel Bearing Version
* Arọ: 17: 55g
* The seramiiki amị version bụ 1.2 grams Mkpa ọkụ ka nchara amị version
Mere dochie derailleur pole wheel
Firstly, porous spring ọnọdụ ịgba pụrụ ịgbanwe azụ erughị ala n'ụzọ dị ukwuu, melite adịghị ike nke mbụ na-adịghị ike gbatia, na-eme ka elu na ala yinye esemokwu ndu wheel na cogs ihe ndị ọzọ nke ọma.
Nke abuo, na kọntaktị nha nha nọmba ma ọ bụ akara eze nọmba n'etiti yinye na cogs nke n'azụ derailleur 17T ọzọ bụ n'oge gia shifting, ọ dị nnọọ ka tuo n'etiti na abụọ n'akụkụ nke ụfọdụ ruo, ibu akara menjuobi, ndị siri ike na-achịkwa ike.
Egbu, mgbe redesign onu nke adiana usoro, anya n'etiti elu ndu wheel na cogs na-akakwa mma.
1. First, chọta ịghasa nke pole wheel onu na azụ nke n'azụ derailleur.
2. Wepu ịghasa na T10 sikruuokwomoto.
3. dọpụtaara ịghasa.
4. Wepu na teghị na ịghasa na spring n'ihu nzukọ ọhụrụ 12-17T carbon onu.
5. Anyị na-atụ aro idozi nke mmiri na a oghere
6. Griiz titanium axle tupu kpọkọta ọhụrụ onu.
7.Push nke mmiri na onu.
8. Malite bugharia onu na-asọ n'ime n'azụ derailleur. Push niile mgbe jide n'aka na positi-oning post nri na ọnọdụ.
9. Push azụ ịghasa ke onu na idozi na T10 screwdrive.
Next: 17TR Oversized pole wheel System
Aluminum Alloy Derailleur pole wheel
Kpọkọtara Guide Wheels
Bicycle N'azụ Guide wheel
Guide Okporo ígwè ala ụkwụ anọ
Idler pole Jockey wheel Part ngwa
Road Bike N'azụ Derailleur pole Guide wheel
V uzo Guide wheel
V uzo Guide wheel-agba
V Guide wheel-agba
18TX Oversized pole wheel System
17TS Oversized pole wheel System
17TSR Oversized pole wheel System
17TSE Oversized pole wheel System